Xafiiskii Idaacadda Horyaal ee Hargeysa oo gubtay | Somaliland.Org
Xafiiskii Idaacadda Horyaal ee Hargeysa oo gubtay
November 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xafiiskii Idaacadda Madaxa bannaan ee Horyaal ee Magaalada Hargeysa, ayaa gubtay ka dib markii sida la sheegay uu qabsaday Dab ka dhashay Korontada Xafiisku.
Sida uu Somaliland.Org u sheegay Agaasimaha Idaacaddaas Cabdirisaaq Maxamed Dubbad, Dabkan oo ka kacay guud ahaan dhismaha Xafiiska Idaacadda Horyaal duhurnimadii maanta, ayaa baabi’iyay qalab iyo hanti badan oo Idaacaddaasi lahayd. Hase ahaatee, ma jiro khasaare nafeed oo uu Dabkani sababay.
Agaasimuhu wuxuu intaa ku daray in Dabkani ka dhashay Korontada ama Laydhaka Guriga ku jirtay oo Shoodh qabsaday, taasina waxay keentay sida uu Cabdirisaaq sheegay in guud ahaan Xafiisku gubto. “Qalabkii iyo Hantidii Idaacadda badhkood way gubteen, balse markii dambe waxa lagu guulaystay in la bakhtiiyo” ayuu yidhi Cabdirisaaq Maxamed Dubbad.